Ampidino PES 2021 LITE ho an'ny Windows
Ampidino PES 2021 LITE,
PES 2021 Lite dia azo lalaovina aminny PC! Raha mitady lalao baolina kitra maimaimpoana ianao dia eFootball PES 2021 Lite no tolo-kevitray. PES 2021 Lite PC voalohany ho anireo izay manantena ny lalao baolina kitra PES maimaim-poana! Ny lalao baolina kitra eFootball PES 2021 Lite, izay tazonina hatrany aminny FIFA aminny PC, consoles ary finday, dia azo alaina ao aminny Steam ankehitriny. Mba hilalaovana maimaimpoana ny PES 2021, kitiho fotsiny ny bokotra PES 2021 Lite Download etsy ambony.
Sintomy ny PES 2021 Lite
PES 2021 LITE dia manolotra fidirana tsy misy fetra aminireo endri-javatra rehetra aminny maody myClub. Ao aminny MyClub, ianao dia hanangana ekipa nofinofinao manokana aminny alàlanny fanangonana mpilalao sy mpitantana mifanaraka aminny fomba filalaonao manokana. Avadiho ho lasa superstar ny tsainao na sonia Legends sy mpilalao matanjaka hafa hahazoana tombony aminny fifaninanana.
Manolotra fidirana aminny Series Iconic Moment Series ihany koa ny MyClub, ilay karazana mpilalao vaovao matanjaka nampiana PES taminity taona ity. Ireo mpilalao ireo dia misintona fotoana tsy hay hadinoina avy aminny asanny superstar ankehitriny sy taloha, ary mamela anao hanao sonia fiovana mahery vaika anny Featured Pemain ihany koa. Ampio ireo karazana mpilalao matanjaka roa ireo aminny ekipanao ary manjaka aminny fifaninanana!PES 2021 LITE koa dia miaraka aminny maody Matchday, maodely PvP mifaninana izay andraisanao anjara aminny hetsika samihafa entaninny lalao baolina kitra tena izy sy ny fifaninanana malaza ratsy.
Ny maody Matchday dia fifaninanana esports ihany koa, fonenanny eFootball, izay mampiantrano ireo mpilalao aminny sehatra rehetra. Ho fanampinizany, ny PES 2021 LITE dia ahitana ny Local Match sy ny Training mode ahafahanao manatsara ny fahaizanao manoloana ny solosaina. Tafiditra ao koa ny Mode Edit, manome anao fahaizana manokana sy mamorona tsipika, marika ary anaranny ekipa.
Ny Mode Edit dia ahafahanao manafatra angon-drakitra noforoninny mpampiasa hafa ary miditra amina endrika tsy manam-petra. Amboary ny ekipao ary ampidiro aminny fomba milamina ny kianja! PES 2021 LITE,Izy io dia manohana tanteraka ny programa fandaharana eFootball Points natomboka. eFootball Points dia ny vola aminny Program eFootball Points.
Ny isa dia azo alaina aminny fomba isan-karazany, ao anatinizany ny filalaovana lalao sy ny fijerena ny fifaninanana eFootball. Aorianny fahazoana isa dia azonao ampiasaina aminny zavatra sy bonus isan-karazany ao aminny lalao. Azonao atao ihany koa ny mahazo Points eFootball aminny fandraisana anjara aminny vanim-potoananny EFootball 2020-21.
Voalahatra hanomboka aminny volana desambra izy io. Ny sasany aminireo bonus azonao aminny Points eFootball dia azo ampiasaina hanamafisana ny ekipanao, ka aza hadino ny miditra aminny eFootball. Misokatra hahazoana vola betsaka araka izay azo atao! PES 2021 LITE koa dia manana atiny manana fahazoan-dàlana marobe avy aminny mpiara-miasa ofisialini Konami FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United ary Arsenal.
Ity,Ny kliobanny mpiara-miombonantoka amintsika, izay averina lalaovina anaty lalao ary mifantoka aminny antsipiriany, dia misy koa ireo kianjany.
PES 2021 LITE Maodely azo lalaovina
Lalao eo an-toerana
Fifaninanana an-tserasera (voafetra aminny fifaninanana manokana)
Edit Mode (Steam sy PS4 ihany)
PES 2021 LITE ekipa azo lalaovina
Anisanireo ekipa azo lalaovina ao aminny FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Local Match ary Together mode. Ny fomba hafa rehetra dia mamela anao hisafidy ireo klioba mitovy aminilay kinova feno aminny lalao. Ny data MyClub dia azo afindra eo anelanelanny PES 2021 sy ny kinova PES 2021 LITE. Ireo mpilalao ao aminny kinova maimaimpoana sy ny kinova feno PES 2021 dia milalao daholo aminny serivera iray ihany, izay midika fa tsy Azafady, mariho fa ny maody sasany, ao anatinizany ny Master League, dia tsy misy afa-tsy aminny kinova feno aminny lalao. Ny klioba sasany dia tsy azo lalaovina aminny maody sasany ao aminny PES 2021 LITE. Tsy ny fifaninanana maody eFootball rehetra no azo lalaovina aminny PES 2021 LITE Noho ny vokatra mitohy aminnyOVID-19 Ny firenena sasany dia mety mampihatra fanovana farany aminny fandaharana fifaninanana sasany. Vokatrizany,Ny antsipirianny fifaninanana rehetra dia azo ovaina tsy misy fampandrenesana.
FIFA 22 no lalao baolina kitra tsara indrindra azo lalaovina aminny PC sy consoles. Manomboka...
FIFA Online 4 no kinova manokana ho anao hilalao ny lalao baolina kitra FIFA andiany tsara...
WE ARE FOOTBALL ൽ, ഒരു മാനേജർ, പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലബിന്റെ എല്ലാ വൈകാരിക...
Aminny alàlanny fisintomana ny PES 2019 Lite, azonao atao ny milalao Pro Evolution Soccer 2019,...
PES 2021 Lite dia azo lalaovina aminny PC! Raha mitady lalao baolina kitra maimaimpoana ianao dia...